GNOME 40 inosvika kune yazvino Ubuntu 21.10 Mazuva ese Kuvaka | Linux Vakapindwa muropa
Pave nemazuva mashoma kubva iyo GNOME 40 Shell yaive mubazi reImpish Indri "chikumbiro". Asi kana tikadhinda iyo ichangoburwa Yezuva Nezuva Kuvaka kana isu takavandudza iyo yekuvandudza vhezheni yeCanonical yekushandisa system, isu hatisati taona iyo nyowani vhezheni iyo nharaunda iri kufarira zvakanyanya. Nhasi, ndiani anoda kuyedza GNOME 40 MuUbuntu 21.10 unogona kutozviita zviri pamutemo, kana zvirinani zvese zviri pamutemo izvo zvinogona kuve chimwe chinhu chingazotora mwedzi mitatu kuvhura yayo yakagadzikana vhezheni.
Kubva pakuonekwa kwayo, Canonical inotarisira kuchengetedza chitambi chayo. Panongotanga iyo system yekushandisa, isu tinopinda izvo zvatinoona mukutora musoro. Hongu, iyo icon diki pazasi iripo, asi yaive zvakare iri Manjaro Asina kugadzikana. Doko rinochengeterwa kuruboshwe, Chinhu chinonyanya kucheneswa asi kwete sevha iyo inotenda kuti iyo interface isymmetric.
Tsika GNOME 40 pane Ubuntu 21.10
Parizvino, kuora mwoyo kukuru mukuyedza GNOME 40 paManjaro ndiko handi mitezo yese iriko. Purojekiti GNOME yakagadzira yayo nyowani graphical nharaunda kuitira kuti kutsvedza zvigunwe zvitatu kumusoro izvo zviitiko kuti zvioneke, uye kutsvedza zvishoma zvishoma kwaizoita iyo app dhirowa. Kubva pamiyedzo yangu uye kubva kune imwe vhidhiyo yandakaona, izvi hazvishande muUbuntu: kuisa zviitwa zvatinofanira kubaya META kiyi, uye kupinda mudhirowa reapp tinofanirwa kubaya pane icon pamwe neyakajairwa 9 mativi.
Kunyangwe, kudzikamisa zvinhu zvishoma, ndinofanira kutaura kuti "X11" inowanikwa mune ruzivo ruzivo. Nei ichi chidimbu chakakosha cheruzivo? Nekuti zviito zvitatu zveminwe zvinongoshanda muWayland uye iyo Daily Live (Session) haibvumidze iwe kusarudza iyo sarudzo. Pasina komputa iripo yekuisa iyo natively, muchokwadi, iyo yekumisikidza inondipa kukanganisa, hatigone kusimbisa kana chiratidzo chichava chiripo kana kwete (tinofungidzira kuti chiri).
ZVAKAITWA: Mushure mekuyedza nekuisa sisitimu pane USB nekuchengetedza kusingaperi, tinosimbisa kuti chiratidzo chiripo.
Izvo zvese, dhoko padivi, zviripo Semuenzaniso, pane chakaparadzaniswa chikamu cheakavhurika mafomu uko kune zvakare marara anogona uye muZvirongwa ruzivo nezvechikwata chedu runooneka, asi haisi iyo GNOME 40 sekufungidzira. Mumwedzi mitatu isu tichabvisa kusahadzika kwese, kusanganisira neiyo inovimbisa kuti ivo vachaita kusvetuka kwakananga kuGNOME 41.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » GNOME 40 inosvika kuUbuntu 21.10 Mazuva ese Kuvaka, uye Canonical inochengeta dhoko kuruboshwe
Kutenda nekatsamba, isu tichafanirwa kuyedza